Barcelona, Hoggaamiyeyaasha Horyaalka ee Haddana Dhibban!!
Friday, April 19th, 2019 - 13:38:58
Monday October 22, 2018 - 11:19:59 in Wararka by Muuse Cabdi
Kooxda Guulaha ugu fiican leh Xagaagan 2018/19 ee LaLiga Santander waa Barcelona, iyadoo weliba Blaugrana ay ku fariisatay Booska Horyaalka u sarreeya markii ay 4-2 uga badisay kooxda Sevilla, waxay sidoo kale ku farxeen in Atletico iyo Real Madrid ay labaduba dhibco lumiyeen.
Si waliba, Barcelona waxay haddana wajaheysaa dhibaatooyin, kuwaas oo sabab u noqon kara iney ilaashan weyso kaalinta Hore.
Dhaawaca Lionel Messi oo gacanta ka jabay ayaa wuxuu ka mid yahay Caqabadaha in laga gudbo ay dhib badantahay, waxaa horay loo sheegay in 3 toddobaad maqnaan doono, waxaana kulamada ka mid ah ciyaarta Clasico iyo 2da lug ee Champions League ay la ciyaarayaan Inter.
Xiddigo kale oo wanaagsan ayaa jooga sida Ousmane Dembele.
Wuxuu booska ka beddelay Laacibka Lambarka 10-aad kulankii Sevilla, balse uma uusan qaabeyn Karin sida Messi.
Dhibaato kale waa difaaca.
Marc-Andre ter Stegen ayaa sameeyay Laba Badbaadin oo lala yaabay kulankii ay la qaateen kooxda reer Andalus, in kastoo 2 gool oo kale laga dhaliyay.
Waxay aqbaleen in laga dhaliyo 11 so sanadkan, kaliya 9 kulan oo ay ciyaareen.
Waxaana dhaawac ku maqan, dhowr difaac oo waxaa soo haray kaliya Gerard Pique iyo Clement Lenglet markaan ka hadalno difaaca dhexe ee Asliga ah iyagana Bandhiggoodu ma wanaagsana, waxaa sii raaca in Sergi Roberto iyo Nelson Semedo ay yihiin kuwo booskaas lagu dari karo mararka qaar, haddii la huri waayo.
Dhibaato kale waa Ernesto Valverde wuxuu aad ugu qalqalaa Beddellada.
Iyadoo Malcom iyo Arturo Vidal aan loo isticmaalin keydka Ciyaara ee joogtada ah, xataa waxaa jira 3 ciyaartoy oo kale sida Carles Alena, Sergi Samper iyo Denis Suarez – oo aan sidoo kale wax daqiiqad ah ciyaarin dhowaanahan.
Waxay joogaan kaalinta u sarreysa, balse haddana waa dhibbanayaan, miyaan la Oran karin Barcelona.